၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ Archives | Frontier Myanmar
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ရန်ကုန်တိုင်း သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွေအနက် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ အဲဒီမဲဆန္ဒနယ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း လွှတ်တော်မင်းသားကြီးလို့ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းညွန့်၊ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ အင်ပြည့်အားပြည့် အနိုင်ရဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အမျိုးသား.
Breaking News, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်ပွဲ ပရိသတ် တစ်ထောင်ခန့်လိုက်ပါ
pmn_usdp_campaign.jpg ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်ဖျော်ဖြေရေးယာဉ်ကို တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ – စိုးသန်းလင်း နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၅ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် ပျဉ်းမနား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ဝင်းဝင်းသီ ဦးဆောင်သည့် ပရိသတ် တစ်ထောင်ခန့်ပါဝင်သော ပါတီအောင်နိုင်ရေး ဖျော်ဖြေ စည်းရုံး လှည့်လည်ပွဲကို ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခွဲမှစ၍.
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ, ဆောင်းပါးကဏ္ဍ
ရွေးကောက်ပွဲနေ့ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ အာဏာရ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီသည် အရှက်ရဖွယ်ရာ ရှုံးနိမ့်မှု မဖြစ်ရလေအောင် ၎င်းတို့ တတ်သမျှသော လှည့်စားချက်များကို အသုံးချလျက်ရှိသည်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်နိုင်ရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက အသုံးချနိုင်ဖွယ်ရှိသော လှည့်စားချက် ၁၀ ခုကို Frontier က တွေ့ရှိထားသည်။ FRONTIER စာတည်းအဖွဲ့ ရေးသားသည်။ usdp_candidates_seen_at_public_meeting_in_zeyarthiri_tsp_npt_on_28_sept_2015.jpg.